लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल पुनः नियुक्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सुर्खेत — अक्सिजन अभाव भएपछि ‘कोभिड विशेष अस्पताल’ लाई उत्तरतर्फको पुरानो भवनमा सारिएको छ । प्रदेश अस्पतालको पुरानो भवनमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएकोले कोभिडका बिरामीको बढ्दो चापलाई उपचार गर्न सहज हुने अस्पतालको भनाइ छ ।
पुरानो भवनमा रहेको अन्तरंग विभाग (इन्डोर) लाई नयाँ भवनमा सारिएको छ । इमर्जेन्सी र प्रशासन विभागलाई पनि सार्ने तयारी भइरहेको अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए । उनका अनुसार कोभिड अस्पताल रहेको नयाँ भवनमा पनि अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ भवनमा पनि अक्सिजन प्लान्ट जोडिएमा तत्कालको लागि अक्सिजनको समस्या नहुने निर्देशक डा. खड्काको भनाइ छ ।
सुर्खेतमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार शनिबारसम्म कर्णाली प्रदेशभर १ हजार ६ सय ३३ जना सक्रिय संक्रिमत रहेकामा सुर्खेतमा मात्र ९ सय ३४ जना छन् । संक्रमित ५० जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन डा. पौडेलले दैनिकजसो २–३ जना कोरोनाका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका बताए । तर तिनीहरुको लक्षण र अवस्था हेरेरमात्र भर्ना गर्ने गरिन्छ । ‘कतिपय संक्रमित त सामान्य अवस्थामा भए पनि आत्तिएर आउँछन्, हामीले परामर्श गरेर औषधि दिएर पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘आएजति सबैलाई भर्ना गर्ने हो भने त एक–दुई दिनमै थेग्न हम्मे हुन्छ ।’ अक्सिजन आवश्यक पर्ने जटिल खालका बिरामीलाई मात्र भर्ना गर्ने गरिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ १५:१७